Inkampani Uhlolojikelele - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
I-Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. itholakala e-Building 38, Jinguo park park, No. 500 Zhenkang road, Jinshan district, Shanghai, sineminyaka engaphezu kwengu-15 yobungcweti bokuhlwaya i-CNC eShanghai, ikakhulukazi ku-CNC milling, CNC ukuvula, ukuguqula imishini yokugaya, i-CNC machining, i-4/5 axis CNC machining, i-Surface grinding, i-Laser cutting, i-Sheet metal bending welding njalonjalo. Inkampani yethu ihlanganisa indawo engamamitha skwele ayi-1,200, inani labasebenzi lingaba ngu-30, 10 abaphathi bezobuchwepheshe, abahloli bekhwalithi aba-5. Main imishini ukukhiqizwa amasethi angaphezu kuka-30.
Izici ze-CNC Machine
1. Izici ezivelele ze-CNC machining
Kubalulekile ukuqaphela lapha ukuthi amathuluzi we-CNC machining avame ukutholakala ngesiphathi soshintsho lwamathuluzi oluzenzakalelayo futhi alawulwa wuhlelo. Ngakho-ke, kusobala ukuthi inqubo yokusebenza igxile kakhulu emvelweni. Kuyo yonke imishini ye-CNC, uhlelo lokulinganisa lwe-elekthronikhi lusetshenziswa ku-eksisi ngayinye elawulwayo. Amasistimu wokulinganisa ajwayele ukusetshenziswa emishini ye-CXNC ukukhomba ukubekwa kwesilayidi eslayidini.
Lezi zinhlelo futhi zidlala indima ebaluleke kakhulu ekuqondiseni ithebula lokuphotha nokukala ijubane lokuphotha langempela. Izilawuli ze-CNC yizinto eziyinhloko zomshini we-CNC. Izilawuli ezintsha ze-CNC zenzelwe izinhlelo ezilula ezihlobene nokuguqula izikhungo zemishini nokugaya. Ngakolunye uhlangothi, izilawuli eziphambili zezinombolo zekhompyutha zivumela ukulawulwa okunembe kakhudlwana kwezimbazo ezahlukahlukene, kubenze bakwazi ukuhlanganisa izikhundla ngokushesha. Ngakho-ke ake sibheke ezinye zezici eziyinhloko ze-CNC machining.
2. Automated Lubrication izinhlelo
Kuyafaneleka ukusho lapha ukuthi ungathola ukwethembeka kwesikhathi eside kusuka kuthuluzi lomshini elincike kusheduli ejwayelekile yokulungisa nokugcoba. Kuyiqiniso elijwayele ukubonwa ukuthi ukuthambisa okunganele kwamabheringi kungadala ukulimala ngaphambi kwesikhathi kuwo. Ngaphezu kwalokho, ukuthambisa okunganele nakho kungalimaza ujantshi wethrekhi. Ngamanye amagama, uma kunokuntuleka okuphelele kokuthambisa, ukuzinza komshini kuzokwehla.
Imvamisa, izindleko zokulungisa ezihlobene nemishini ye-CNC ziyabiza impela. Ngakho-ke, kunengqondo ukukhetha leyo mishini ye-CNC efakwe umshini wokuzigcoba. Kubizwa nangokuthi ukuthambisa okuzenzakalelayo, lapho ukuthwala ngakunye kwedivayisi kuxhunywe eziningini eziphakathi nendawo. Isiphathisi sokuthambisa sinikezela ngokuzenzakalela okuphakelayo okuhleliwe nokucindezelwe kukaphethiloli ngamunye.
3. Ukuguqulwa kwenqubo ye-CNC machining kungcono
Ngemuva kokulungisa amaphutha nokuqinisekisa inqubo yokusika yokuhlola, ukuguqulwa kwemishini ye-CNC kungasetshenziswa ukonga isikhathi esibucayi nokuqinisekisa ikhwalithi ngasikhathi sinye. Ngaphezu kwalokho, inqubo ingasetshenziswa njengesifanekiso sokucutshungulwa okulandelayo kwezinye izingxenye ezifanayo. Ngakho-ke, ngezici eziguqukayo zemishini ye-CNC, ukuhamba komsebenzi okuhlukahlukene kuyo yonke imboni kungalungiswa.
4. Izinketho zokuphotha ku-CNC machining
Kokubili imishini ye-3-axis ne-5-axis CNC inebubanzi obunwetshiwe bezinketho lapho umongo umayelana nezipikili. I-HSD ne-Perske spindle sezivele zaba namandla amakhulu embusweni we-CNC machining. Zisebenza kahle futhi zingathatha imithwalo ngokuqinisekisa ukunemba kwakho okusemandleni ngasikhathi sinye. Ngaphezu kwalokho, amaphampu we-vacuum ayinto ongayikhetha emishinini ye-CNC. Amaphampu we-vacuum anika amandla nokuzinza kuma-setups womshini we-CNC.
5.Izihleli zokusetha ubude bamathuluzi
Ama-setter okuzenzakalelayo wamathuluzi angenza imishini ye-3-axis ne-5-axis CNC isebenze kahle. Izinhlelo zokulinganisa ubude zinembe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ziqukethe i-M-Code eyodwa eyenza ukukhethwa kwethuluzi endaweni ezenzakalelayo. Ngaphezu kwalokho, ukubeka ithuluzi endaweni yokulinganisa iphenyo kungalungiswa kahle ngosizo lwama-setter wobude bamathuluzi okuzenzakalelayo. Lapho ukuhlolwa sekutholile umshini, ubude bamathuluzi obulinganiselwe buyagcinwa ngokuzenzekelayo kutafula le-offset yethuluzi le-Fagor.
Izilawuli ze-Fagor nazo ziyinto ebalulekile yemishini ye-3-axis kanye ne-5-axis CNC. Yize imishini eminingi ye-CNC iza ifakwe lokhu kusebenza, abanye abakhiqizi abayifaki kumishini ye-CNC. Uma kwenzeka umshini wakho we-CNC ungenayo i-Fagor Controls, kungakuhle ukuwathenga kunoma yimuphi umphakeli ovela eceleni.
7. Kubalulekile ukwenza izivivinyo ngaphambi kokuqala ngenqubo yokukhiqiza
Ukunemba, imvelo yesikhathi sokusebenza ye-CNC machining izisebenzele kakhulu. Lesi yisizathu sokuthi umuntu adinge ukunaka okufanelekile ekuphepheni nasekhwalithi. Ngamanye amagama, izinqubo zokuchofoza ezihlobene ne-CNC kumele zihlangabezane nazo zonke izindlela zokusebenza nezokukhiqiza esivivinyweni sesilingo. Ukuhlolwa kwesilingo ngaphambi kokuqala empeleni kwenqubo yokukhiqiza kungakusindisa ezinkingeni eziningi.
1.I-Ouzhan inamasethi angaphezu kuka-30 emishini esezingeni eliphakeme ye-CNC, iningi layo elithunyelwe lisuka eSwitzerland naseJapan, ukunemba kwethu kungafinyelela ku-0.01mm.
2. I-Ouzhan njengamanje inabasebenzi abangaphezu kwama-30 kanti ngaphezu kuka-10% baneziqu zeMasters noma zeDokotela. Onjiniyela bethu abayishumi bonke bathweswe iziqu emanyuvesi aphezulu aseChina asebenze kakhulu emishinini futhi banolwazi olunothile lolwazi.Izisebenzi zethu zokuhweba zakwamanye amazwe zingabaphothule izifundo zabo kwezokuhweba zaphesheya kwezilwandle, banekhono kunqubo yokuhweba kwamanye amazwe.Iminyango emibili yenkampani yethu ingasiza futhi ikulethele insiza enhle kakhulu .
3. I-Ouzhan inefektri yayo ye-CNC machining, kusukela ifektri yethu yasungulwa eShanghai ngo-2005, sisebenzise amashumi eminyaka esipiliyoni sethu esinothile nolwazi ku-CNC machining field ukunqoba ukuqashelwa kwamakhasimende amaningi. NjengeTrutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco njalonjalo.